Umhla My Pet » Kuba Love kwe Pet
Mna umntu elibaliweyo kakhulu. Yonke into endiya kuyenza ngokugqibeleleyo izicwangciso, ngokuba yonke ndiya kwenza into qhinga kakhulu. Xa isigqibo ukuba ndifuna isilwanyana, Ndacinga nzulu ngexesha ukuzibophelela, iindleko zemali kunye ubudlelwane bexesha elide ukuba siya kuba kunye. Yintoni Andizange ukubala yindlela apho ikati yam, Beau uza kundisindisa.
Kwiminyaka yam amabini anesihlanu, Mna ziye zaqwalaselwa ubomi bube nzima. Phakathi kwayo yonke, imihla yam ngathi mhlophe nokunyamezeleka okweSodom sisazi ukuba nekati yam ulindele kum ekhaya. ubulolo iyalawuleka njengoko Beau ibonelela neqabane inoboya osoloko ekulungele ukuba athuthuzele kungekho okusesikweni. Imihla kunye nezilo iyure-elide cuddling esosula iinyembezi inika uncedo kwaye nokuphumla kunokuba ndandicinga ukuba kunokwenzeka. Imihla kunye iyure-long iiseshoni umdlalo wazala kukuhleka ibonelela uvuyo ngaphezu kokuba ndicinga kunokwenzeka. Uthando nesilwanyana ngokwenene nelokuphilisa.
Esinye sezizathu zokuba ndifuna isilwanyana ukuba ukunceda Kumaxabiso ezizezemvelo yam lukamama. Ndandisazi ukuba uthando pet wam kuselwa ukungena unina endifuna kwaye kufuneka ukuba abantwana bam elizayo. ukuxhomekeka Beau uye Undazisile uxanduva sizincame ukuphakamisa ngokwenene akhulise omnye ophilileyo. Ukubuyisa, umsa ngokungagungqiyo iye kundithanda nzulu. Kuye babonisa uthando endingazange ndiyazi ukuba kum. Uthando nesilwanyana nako ukufundisa ngokwenene intsingiselo yothando.
imigudu yam ibalwe ekufumaneni pet wam wakhokela ukukhwela imoto iiyure-amathathu kulo lonke eli imo Michigan. Akuqalisa ahlangule, omnye ekati weza kanye phezu kum, ebekwe phantsi lengubo yam, kwaye angazishiyi. Mna ibango. Ukususela loo mini kuse phambili, ikati yam yaye kuye kwafuneka ngokuzikhanyeza eyodwa. Beau Sinobuhlobo kakhulu, phantse inja-ezifana kodwa uxelela kakhulu umntu. Ntlanganiso abahlobo bam amasoka kule minyaka, Beau kubonakele ngokwawakhe kwakhona kwaye kwakhona kugweba kakuhle umntu. mna, inyaniso, Mandibuyele kuye kwengcaciso. Uthando nesilwanyana unokuyixela ngokwenene kuphawu intension kwabanye.
Evela kwikhaya eyaphukileyo nokuba kancinane ukuba akukho ubudlelwane kunye notata wam wandikhokelela babe evaliweyo-off. Ngenxa yale nto, xa ukhetha pet yam, Ndandisazi ukuba ukuze ndibe yindoda. Uhlobo olukhathalayo umsa ukuba zibonise Beau kukhokelele naye yena ukuba abe ikati lothando kakhulu. thembele kum indibonise indlela abasemngciphekweni yena ngokwenene kolu lwalamano. Uthando Beau undibonisile indinika ithemba, kuba uye waphefumlela ukuba baqalise baze babe sesichengeni. ikati yam undibonisile ukuba nothando omnye umntu wawungenakuzisola umngcipheko. Uthando nesilwanyana angabonelela ngokwenene ithemba.
Uthando 7 Amanyathelo Easy
Endizithandayo Animal-Friendly Sezibini